बियरको बारमा एक्कासी यो केटीलाई के भयो ? जसका कारण उनी ड’रले काँप्न थालिन्, मानिसहरूले भने- ‘यो भूत हो’ (भिडियोसहित) – List Khabar
Home / समाचार / बियरको बारमा एक्कासी यो केटीलाई के भयो ? जसका कारण उनी ड’रले काँप्न थालिन्, मानिसहरूले भने- ‘यो भूत हो’ (भिडियोसहित)
बियरको बारमा एक्कासी यो केटीलाई के भयो ? जसका कारण उनी ड’रले काँप्न थालिन्, मानिसहरूले भने- ‘यो भूत हो’ (भिडियोसहित)
admin December 14, 2021 समाचार Leaveacomment 41 Views
लन्डन। के त्यहाँ साँच्चै भूतहरू छन्? यो प्रश्नको सही जवाफ दिन गाह्रो छ। तर भूतको माध्यमबाट बेलायतको एउटा घटनालाई उल्लेख गरौं। वास्तवमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ, जसमा एक महिला बियर बारमा रक्सी खाइरहेको देखिन्छिन। तब मात्र त्यहाँ राखिएको एउटा गिलास स्वतः बाहिर झर्छ। यो देखेर महिला छक्क परिन् । काउन्टरबाट गिलास कसैले नछोइकन झरेको देखाइएको छ। भिडियो साउथ व्रोक्सल, विल्टशायरको लङ आर्म्स बारमा खिचिएको थियो।
पुरा भिडियो २० सेकेन्डको छ । लांग बारले यो भिडियो ट्विटरमा साझा गरेका हुन्। भिडियोमा ति महिला एक छेउमा बसिरहेकी छिन् भने अर्को छेउमा पुरुष बसेको देखिन्छ । दुवै कुरा गरिरहेका छन् । केही सेकेन्डपछि महिला त्यहाँबाट निस्कन्छिन् । त्यसपछि अचानक त्यहाँबाट एउटा गिलास खस्छ र आफै फुट्छ। भिडियोको साथमा एउटा क्याप्शन छ जसमा लेखिएको छ, “जर्जले आज राती हाम्रो निवासमा भूत खेल्दै हुनुहुन्छ।” तलको शेल्फमा हेरिरहनुहोस्।
यो भिडियो ३४ सय पटक हेरिएको छ । भिडियोमा नेटिजन्सले अचम्मको कमेन्ट गरिरहेका छन् । डेलीमेलको रिपोर्ट अनुसार भिडियो भएको बारमा यसअघि पनि यस्ता घटना भइसकेको छ । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘म भान्साकोठाबाट जाँदैछु, जसको ढोका दुवैतिर खुल्छ । हेर्दा अर्को तर्फबाट कसैले तानेको देखिन्छ । तिमीलाई त्यस्ता चीजहरूसँग बाँच्न बानी बसाल्न्नु पर्छ ।
अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, भिडियो हेरेर म पनि छक्क परेको छु । म भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्दै छु कि मदिराको वरिपरिको रंग पनि घुमिरहेको देखिन्छ। केही महिना अघि पनि यस्तै एउटा घटना घटेको थियो । आफ्नो अनुभव बाँड्दै अर्का एक व्यक्तिले लेखेका छन्, जब मेरो बुबा बित्नुभयो । हामी अन्तिम संस्कारको लागि सूट लिन ड्राइभ गर्दै थियौं। म र मेरो भाइ आफूलाई खुसी पार्न खोज्यौं। यसै क्रममा अचानक कारको विन्डस्क्रिन पूरै फुट्यो । यो धेरै ड’रला’ग्दो थियो। एक्कासी के भयो हामीले बुझेनौं?
Previous म कामी हो ,मेरो जातमा मलाई गर्व छ:-अभिनेत्री निरुता सिंह
Next जी न्यूज हिन्दीकी पत्रकारलाई प्रहरीले काठमाण्डौंमा गर्यो पक्राउ